Iphrofayela Yenkampani - Qiangzhong Machinery Technology Co., Ltd.
I-Wenzhou Qiangzhong Machinery Technology Co., Ltd. ingumkhiqizi osebenza kahle wezinto zokusebenza oketshezi, kufaka phakathi i-High Shear Emulsifiers, i-Stainless Steel Mixing Tank, i-Colloid Mill, i-Sanitary Pumps, i-Sanitary Filters, i-Manhole Covers, i-High Precision Sanitary Valve Fittings, njll. esetshenziswa kabanzi ezimbonini ezinjengezindawo zokuphisa utshwala, imikhiqizo yobisi, iziphuzo, amakhemikhali, izimonyo, imishanguzo, ama-bio-pharmaceuticals, nokuningi. Siphinde futhi sinikeze amasethi wenkonzo aphelele kusuka ekwakhiweni kwephayiphi jikelele, ubunjiniyela, ukufakwa kwesondlo, konke ngokuvumelana ne-GMP, QS, ne-HACCP.
Ngobuchwepheshe obuthuthukile nemishini yokukhiqiza, ukuhlangabezana ngokuqinile nezindinganiso zemboni, nokulawulwa kwezinqubo zonke, ikhwalithi yethu ithuthukiswe kahle ngokuqhubekayo. Kuze kube manje, imikhiqizo seyithengisiwe ezungeze iChina futhi yathunyelwa nasemhlabeni jikelele, njenge-Europe, i-America, i-Southeast Asia, i-Middle East kanye nokunye.Sibonga ukwesekwa okuvela kuwo wonke amaklayenti, okusenze sathuthuka ngokushesha. Ngenkathi singeke siyeke, ngokungafaniyo sizothuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo ukunika amandla i-Qiangzhong ukuthi ibe ngumlingani onokwethenjelwa wamakhasimende amaningi asekhaya naphesheya kwezilwandle ngohlelo lwayo olusezingeni eliphezulu lokuphatha kanye nensizakalo esezingeni lokuqala.
I-Qiangzhong izokwenza imizamo engcono yokuthola ubuchwepheshe obuthuthukile, ifune ochwepheshe abasezingeni eliphakeme futhi iqinise ukuphathwa kwangaphakathi ukukhulisa amaqembu ethu ukuze inikele ngemikhiqizo ephezulu kanye nensizakalo engcono ngesimo sengqondo esihle, ibambe iqhaza emncintiswaneni womhlaba wonke.
Uphawu lokuhweba "Qiangzhong" ukuzibophezela kwethu kumakhasimende, okuzuze ukwethenjwa ngabadumile, futhi ngesibindi sizothuthukela phambili ukuze sihle kakhulu.